Atahorana Ny Fisondrotam-bidin’ny Tapakila Noho Ny Nandravàn’i Shina Ny Ministeran’ny Fitaterana An-dalamby Novesaran-trosa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2013 3:36 GMT
Nanapa-kevitra i Shina ny handrava ny ministeran'ny fitaterana an-dalamby matanjaka saingy bokan-trosa tao aminy mba hampakàrana ny fahafahan'ny governemanta miasa tsara sy hiadiana amin'ny kolikoly, hetsika iray izay ahiahian'ny maro amin'ireo Shinoa mpampiasa ny aterineto ho midika fisondrotam-bidin'ny tapakila atsy aoriana atsy.
Efa ela ilay ministera no lasibatry ny fiampangàna azy ho manao kolikoly sy toerana anjakan'ny tantara ratsy. Tamin'ny 2011, niteraka tsy hafaliana tety anaty aterineto ny fifandonan'ny fiarandalamby roa haingam-pandeha. Tamin'ny 2012, nametra-panontaniana mikasika ilay tranonkala nampiasa loha azy ireo, fanaovana famandrihana tapakila, ny Shinoa, izay nandanian'ny ministeran'ny fitaterana andalamby vola mitentina 300 tapitrisa yuan (47.8 tapitrisa dolara US) ny nanangànana azy, hatramin'ny fanaovana lahatsary fampahafantarana azy izay nandaniana 18.5 tapitrisa yuan (2.94 tapitrisa) ny famokarana azy.
Noharabain'ireo media Shinoa ny fandravàna ilay ministera. Nanao fanmarihana ny China Daily hoe:
Na izany aza, niteraka [zh] firaradrarahanà valinteny tsy mahita afa-tsy ny lafiny ratsy ilay hetsika, tao amin'ny Sina Weibo, sehatra Shinoa malaza amin'ny fitorahana bilaogy kiritika. Maro no nanahy fa resaka fanondrotana vidinà tapakila amin'ny fiarandalamby io. Iray amin'ireo mpampiasa tranonkala i “Su Qun” no nanoratra hoe [zh] :
Nampiakoako izany i Laoxu [zh]:
“Wuyue Sanren” nikevitra [zh] fa tetika fotsiny ilay hetsika mba hanilihana ilay trosa be misavovon'ny ministera:
Lu Zhengwei, mpahay toekarena, dia nanamafy [zh] ihany koa fa ny trosa midangana dia hery manosika ho amin'ny fanavaozana:
Xiao Feng, mpanao gazety ao amin'ny New Weekly [zh] no namintina hoe [zh] :